SOMALITALK - DIGNIIN
بسم ألله ألرٌ حمن ألرٌ حيم
VIRUS ALERT: DIGNIIN VIRUS
SomaliTalk | Minneapolis, MN
Sida ay qortay shabakada esecurityplanet waxaa maalintii Jimcada ee inasoo dhaaftay ay shabakado badan oo qaabilsan barnaamijyada ammaanka computerada iyo Internetka ay qoreen in halis weyn oo xagga amaanka ah ay soo foodsaartay barnaamijyada Windows NT 4.0, 2000, XP iyo Windows Server 2003. Waxayna shabakadahaasi sii xiganayey qoraalkii Microsoft ee July 16, 2003 kaas oo dadwenaha adeegsada barnaamijyadaas ku wargelinayey in ay soo rogtaan barnaamij halistaas difaaci kara oo laga helikaro boggaas Microsoft. [sidii aad usoo rogan lahad barnaamijkaas hoos ka eeg].
Halistani waxa weeye in shuftada Internetka ee loo yaqaan "hackers" ay computerka meel fog ka hagayaan ayagoo computerka ka xadi karaa waxyaabaha ku jira sida macluumaadka xasaasiga ah, waxayna masaxi karaan dhammaan akhbaarta iyo faylasha kujira computerka.
Arintaan waxaa Microsoft ku sheegay in ay tahay mid halis sare ah. Maadaam aay dhibaatadani saamyn karto computerada caadiga ah (PC) iyo kuwa gacanta (Laptop). Sida aan kor ku xusnayna Microsft waxa uu daabacay sidii halistaas looga hor tegi lahaa. Microsft waxa uu sheegay in barnaamijyada ay halistaasi saamayneyso ay yihiin:
Arintaan halista ah waxay cirka isku shareertay kaddib markii koox shuftada Internetk ah ay Internetka ku daabaceen xeer (code) awood u leh in uu weerari karo meelaha ay ka jilcsan yihiin (ama ka nugul yihiin) barnaamijyada Microsft ee aan kor kusoo xusnay. Taas oo lagu macneeyey in ay sababi karto arin u dhiganta daacuunkii Internetka.
Sarkaal ka tirsan Panda Software's Virus Lab waxa uu arintaan nuglaanta ah ku tilmaamay mid aad halis weyn u ah, waxana uu dadweynaha adeegsada barnaamijyadaas Microsoft kula taliyey in ay si degdeg ah computerkoodu usoo gashadaan barnaamijka kahortagga ah [hoos ka eeg sida aad barnaamijkaas usoo rogan lahad].
Tallaabooyinka aad qaadeysid si aad usoo rogatid barnaamijyada difaaca u ah halistan cusub:
Ugu horayn hubi in computerkaagu uu yahay kuwa ay saamaynta ku leedahay halitani, waxaad taas ku hubin kartaa:
Guji Start, kaddib guji Run.
Khaanada Run ku qor winver
kaddib guji OK.
Waxaa markaas soo bixi doona shaashad ay ku qoran tahay nooca barnaamijka ee computerkaaga kujira, hubi in uu barnaamijkaasi yahay mid kamida kuwan: Windows NT® 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server™ 2003. Haddii uu mid kamid ah kuwaas computerkaagu ku shaqeeyo markaas halistaasi waa ku saamayn kartaa. Waana in aad markaas soo rogataa barnaamijka microsoft ee ka hortagga ah. Kaddib marka aad boggaas booqatid raac farriimaha kuqoran halkaas.
Faahfaahin sidii aad barnaamijkaas usoo rogan lahayd:
Ugu horayn hubi in computerkaaga ay kujiraan barnaamijyada kor ku xusan ee lagayaabo in halistu soo food saari karto, si aad u hubisid raac habkan:
Kaddib shaashada soo bixi doonta ee cinwaankeedu yahay Run sanduuqa ka bannaan ku qor winver
Kaddib guji "OK"
Waxaa markaas kuu soo baxaya shaashad muujineysa nooca "Windows" ee computerkaagu adeegsanayo ama ku shaqaynayo.
Guji "OK" si aad shaashada sare u xirtid.
Marka aad xaqiiqasatid in computerkaga uu kujiro mid kamid ah: Windows NT® 4.0, Windows 2000, Windows XP, ama aad adeegsaneysid Windows Server™ 2003 markaas raac habka hoos ku qoran si aad halista computerkaaga kusoo foolyeelankarta uga hortagtid.
1. Booqo website-ka microsoft u qoodeenyey cusboonaysiinta barnaamijyada halista u ah shuftada Internetka [Guji Halkan]. Kaddib bogga soo bixidoona dhankiisa ugu hoose guji meesha ay kag aqoran tahay Get this and other available Windows updates waxaa markaas soo bixi doona boga kale.
2. Marka uu boggaasi kuu soo baxo, guji halka ay kaga qoran tahay Scan for updates.
3. Waxaa markaas bogga Microsoft uu fiirin doonaa ama (Scan) kusameeyo computerkaaga, waxyar kadibna waxaa shaashada kasoo bixi doona qoraal kuu tilmamaya inta wax ee Windows ee cusboonaysiinta u baahan. Kaddib guji halka ay bogga soo bixi doona kaga qoran tahay Review and install updates.
4. Waxaa markaas soo bixi doona bog sharaxaad kooban ka bixinaya waxa ay yihiin waxyaabaha cusboonaysiinta u baahan iyo sababta ay cusboonaysiinta ugu baahan yihiin. Kaddib guji halka ay ku qoran tahay , waxaa markaas soo bixi doona shaashad ku xusuusineysa waxyaabaha aad cusboonaysiin doontid, kaddib guji "OK".
5. Waxaa markaas Microsoft kuweydiin doonaa in aad akhridid qoraal kuqoran shaashad, kaddib hadii aad aqbashid waxa ku qoran guji "Accept"
6. Waxaa markaas computerka kusoo xawilmi doona barnaamijyadii cusboonaysiinta.
7. Marka barnaamijyadii loo baahnaa ay kusoo xawilmaan computerka, waxaa furmi doona shaashad kugu hagi doonta sidii barnaamijyadaas loogu xafidi lahaa computerka. [Tusaalahan waxaan u adeegsadey Windows XP]. - Waxaa xusid mudan in shaashada hoose ay ku xusuusin doonto in ay haboon tahay in aad dhammaan faylasha computerkaga kujira koobi kasamaysatid inta aadan nidaamkan bilaabin (back-up) iyo in aad xirtid dhammaan faylasha markaas furan.
Kaddib guji "Next>"
8. Microsoft waxa uu markaas marlabaad kuweydiin doonaa in aad aqbashay xeerka ku qoran shaashada hoose, haddii aad aqbashay guji "I Agree".
9. Kaddib shaashada soo bixi doonta guji "Next>" [marka aad dooratid mesha ku haboon]
10. Waxaa markaas bilaabmi doona in si rasmi ah internetka looga soo xambaaro macluumaadka uu computerkaagu u baahan yahay. [ogow waxaa lagayaabaa in xawilaadaasi ay qaadato saacado badan taas oo ku xiran xawliga computerkaaga iyo xawaalaha khadka computerka kuugu xiran. Waxaan ashardi ah in xiligaas uu computerku ku xiriirsan yaha ykhadka Internetka]
11. Marka dhammaan macluumaadkii loo baahnaa uu kusoo xeroodo computerka waxaa kuu soo bixi doona shaashad ku tilmaami doonta in ay shardi tahay in computerka ladamiyo oo la daaro si uu u hirgalo barnaamijkii lasoo xawiley.
Waxaad markaas ku guulaysatey in aad barnaamijkii ku hubsatay compuetkaaga. Ogow markasta waxaa haboon in aad la socotid waxyaabaha halista ah ee kusoo kordha Internetka. Waayo markasta oo ay shuftada Internetku xeelad u helan in ay computerada burburiyaan, waxaa markiiba soo baxa daawadii looga hortegi lahaa, haddii markaas aadan feejiganyan waxaad ku dhici kartaa dabinka shuftadaas - waa in marka ay shuftadu hal tallaabo horay u qaadaan aad adigun alaba tallaabo horay u qaadaa si aysan weligood kuusoo gaarin.
VIRUS KALE OO HALIS AH
Emailkaaga Waqtigeedii Waa Dhammaaday
[waa Virus been ah oo Kelmedahaas xambaarsan]
Waa email maalmahaan kucusub Internetka taas oo xambaarsan erayo muujinaya in emailkaaga waqtigeedii dhammaaday ama ay dhacayso (expire). Waxaana markaas emailkaasi ku kuu sheegeysaa in aad furtid lifaaq la socda oo ay kuu sheegeyso in uu muhiim tahay in aad lifaaqaas furtid maadaama uu ka yimid madaxa websitekaaga ama websiteka aad emailkiisa adeegsatid. [taas oo ah been abuur aan waxba ka jirin].
Emailkaasi waxay u qoran tahay sidan:
From: Admin (ADMIN@websitekaaga.com)
Subject: your account %user%
--- Best regards, Administrator
Haddii aad furtid lifaaqa .ZIP ee emailkaas la socdaa, waxaa furmaya faylasha lifaaqaas kujira oo uu kamid yahay faylka MESSAGE.HTM kaas oo durbadiiba samaynaya fayl lagu magcaabo foo.exe kaas oo ah 'program' awood u leh in uu hubiyo in computerkaagu ku xiriirsan yahay Internetka asagoo ka bilaabaya bogga google.com marka uu ogaado in computerkaagu internetka ku xiriirsan yahayna wuxuu computerkaaga kabaarayaa waxa email ee kujira, halkaas uu usii diri doono dhambaal dhammaan intii email uu ka helay computerka.
Xalka Viruskani waa in la masaxo emailka uu la socdo ayadoo aan la furin faylka liqaaqa ah. Akhbaar dheeraad ah oo la xiriira Viruskan ka eeg shabakadaha Network Associates iyo Trend Micro.
Waxaadna xusuusnaataa in aadan furin lifaaq la socda email aadan garanayn meel ay ka timid. Waxaa kale oo xusid mudan in beryahan ay jiraan email uu la socdo Virus kuwaas oo wata cinwaanka qof aad garaneysid, emailadaas hubi lifaaqa la socda nooca uu yahay. Haddii aad ka shakidid isla markaasnaa aad emailkana qofka leh garaneysid, qofkii email u dir adigoo weydiinaya waxa uu yahay lifaaqu. LAAKIIN OGOW WELIGAA HA U JAWAABIN EMAIL AADAN AQOON QOFKA LEH, waayo haddii aad u jawaabtid wuxuu qofkii emailkaas lahaa ogaanayaa in emailkaagu shaqaynayo oo markaas wuxuu kuu sii diri doonaa boqolaal kale, tan kale haddii uu yahay shuftada Internetka oo aad u jawaabtid wuxuu heli karaa cinwaanka computerkaaga (IP Addrss) kaas oo uu markaas si gaar ah kuu soo weerari karo, waa haddii aadan haysan wax kaa difaaca sida "Firewall". Sida uu u shaqeeyo IP Address iyo Firewall waxaan ku sharaxi doonaa CD-ga HTML, FrontPage & Networking ee aan soo saari doono [inkastoo waqtigii aan qorsheynayey in aan soo saaro uu ka dib dhacay hadana insha Allah waa qorshaynayaa in uu dhowaan soo baxo CD-gaasi].
AKHRI VIRUSYADII HORE OO QAARKOOD AY WELI HALISTOODII JIRTO
Faafin: SomaliTalk.com | Aug 4, 2003